Naadiga Hawada sare ee dunidan | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Ardayda dhigata Dugsiga Dhexe ee Oak-Land (OMS) waxay ku mashquulsanaayeen u diyaar garowga himilada bisha. Qiyaastii dersin ardayda fasalka lixaad ayaa qayb ka ah Kooxda Naadiga ee dhowaan la sameeyay. Waxay la kulmayeen iskuul kadib markay ka shaqeynayeen caqabadaha naqshadeynta injineernimada ee udub dhexaad u ahaa safarka Dayaxa.
Toddobaad kasta waxay yeeshaan shirar hawleed halkaas oo ay ku bartaan dhinacyada kala duwan ee dhibaatooyinka booska laga bilaabo naqshadda suunka booska illaa dhirta ku koraysa booska. Kadibna waxaa lagu xujeeyaa inay la yimaadaan xalalkooda, iyagoo la tartamaya 110 koox oo kale oo ka kala socda daafaha Mareykanka iyo Kanada. Ardaydu waxay sidoo kale ku biirayaan wada sheekaysiga tooska ah ee xirfadlayaasha injineerada NASA iyo xirfadlayaal kale oo STEM ah (sayniska, tikniyoolajiyadda, injineernimada iyo xisaabta).
"Carruurtu si aad ah ayey isu taageeraan oo waxay si firfircoon uga shaqeeyaan xallinta arrimaha markay soo baxaan, sida dadka ku jira shaqooyinka meelaha bannaan ay tahay inay sameeyaan," ayay tiri Corrie Christensen, oo ah macallin saynis oo u adeegta sida OMS Space Commander.
Marka laga soo tago dhammaan aqoonta STEM ee ay helayaan, Christensen wuxuu leeyahay ardayda sidoo kale waxay baranayaan xirfado muhiim ah sida isgaarsiinta iyo iskaashiga fog, xalinta dhibaatooyinka iyo u fikirka hal abuur leh.
“U heellanaanta carruurta ee kulankeenna toddobaadlaha ah iyo naqshadaynta mashruucyadooda waqtigooda ayaa dhiirrigelin iyo hawo nadiif ah ku bixisay inta lagu jiro aafadan!” Christensen ayaa yiri.